Isikolo siyindawo ebalulekileyo kwaye intombazana i-hairstyle yesikolo akufanele ijongwe esikolweni ngokukhululekile kwaye ikhululekile. I-hairstyle idinga ukulungiswa kakuhle, ngaphandle koko ekupheleni kwezifundo umama akayiboni intombi yakhe.
Ngoku zifanelekileyo, zibukeka zicocekile kwaye zihle, kwaye xa zihlamba "inamba", zihlala ziqina kwiinwele. Kukho iindlela ezininzi, unokwenza ii-dragons ezi-2, eziphelela kwi-pigtails e-2, onokuyenza kwinqanaba lentloko yenamba. Iidragon ziyakwazi ukuhamba kunye nokujikeleza intloko. Ukuloba yintsimi enkulu yefantasy. Ukongezelela, i-fashionista encinci iya kujonga kakuhle rhoqo ngexesha elitsha esikolweni.
Le nywele iphumelele esikolweni. Ilula kwaye igxile ekunyamekeleni. Ngentsasa, tyalela umntwana uze ufake ikhefu kwisikwere esikolweni. Ukutshintshwa kwesikhumba esifutshane kunokuba isicatshulwa, i-cascade, isikwere. Olu hlobo lwezinwele lufanelekile kwiinwele ezintle, ukunyamekela ukunqunyulwa kweenwele akudingi ukuba abazali baninzi ixesha lokunyula intombazana esikolweni.
Iimpawu zeenwele usebenzisa i-hairpin
Ngeenwele ezide ezide kunye neenwele ezinde, zininzi iindlela zokwenza i-hairstyle yesikolo eneenwele zeenwele. Isitayela esilula kunazo zonke siza kuba ngumsila weenwele. Unokwenza kwintloko ye-pigtails, imisila, uyilo olubunzima lwe-flagella. Iintombi zeenkomfa zingenza i-styles eziyinkimbinkimbi, zisuka kwibakala lesi-5. Kule minyaka, amantombazana abe nolungileyo ngakumbi kwaye ngokubhekisele ngakumbi ukujongwa kwawo.
Ukuba intombazana iya esikolweni sezemidlalo emva kweeklasi, ngoko kungcono ukwenza inwele engaphazamisani nokuzivocavoca, unokwenza umsila ngentloko yentloko, ibhasksi entloko ye-pigtail. Ukuba le ntombazana ilungiselelwe uhlobo oluthile lwesiganeko, ngoko unako ukwenza umzobo kwi-salon okanye wenze iindwangu ezinqabileyo ekhaya.
Ukuba intombi yagqiba ekubeni ilahle ingqungquthela, oko kuya kufuneka ukuba yamkele. Ukususela kwiminyaka eyi-13-16, umntu ukhangele indawo yakhe ebomini, efuna umfanekiso wakhe, ngokwakhe. Ukuba intombazana ifuna ukutshintsha umfanekiso wayo, akufuneki ukuba iphazamise. Akulimazi ukwenza i-haircut cutting. Kodwa ekubudala kwakhe kungcono ukuyeka umbala wekhadikhadi, ukugqamisa, ukutshatyalaliswa kwemichiza.
Amantombazana enqabileyo afanelekileyo amakhanda ezinwele kunye ne-asymmetric bracing, kunye namantombazana amancinci aya kuhanjelwa ngunwele onobunzima. Amakhanda amancinci amancinci kufuneka abe neengqungquthela ezide, ukwenzela ukuba angaphuhlisi i-strabismus. Akuvumelekile ukuba i-long phon "ye-pony" ehlanganisa iinki.
Izinwele ezihlukeneyo zeenwele zivumela ukuba wenze iintlobo ezininzi zezinwele ezisekelwe kwinqanaba lezinwele ezilula. Izindebe zendabuko, "amaqabunga", iinwele zeenwele, ezingabonakaliyo, iirms, i-arsenal yonke yokudala iinqwelo zezinwele zamantombazana, esekelwe kwinqwelo elula yezinwele.
Amantombazana athile abathandana nomoya athetha iinqwelo ze-styles kunye nomphumo "womoya ezinwele" kunye nomgca wokunganaki, kunye nokunyuka kweenwele ezinwele eziphakathi nokuba zide, zibekwe ngeengqungquthela okanye ngamaza. Iinqununu kunye namaphepha zenza umboniso omdala omhle kunye nenhle.
Kwaye kunye neentambo zokubamba iinwele kunye nemigca yobude obude, kunye ne-asymmetry ebizwa ngokuthi, "kunye" ne "emo emoyeni" yabafundi besikolo esiphakamileyo, baqhelekile. Akunakunqwenela ukunqanda, unokukunceda ngeengcebiso, ukwenzela ukuba le nkanyiso ibonakale iyingozi.
Kwiqela ngalinye leminyaka, amantombazana aneenwele. Ukunyamekela ezinjalo iinwele kufuneka kube mncinci kwaye ngoko ukwazi ukudala i-hairstyle enhle kumantombazana.
Idayi emnyama yeenwele kunye nokudada iinwele
Indlela yokuhlamba iinwele zakho ngaphandle kokulimaza iinwele zakho?
Ubunwele bezobugcisa ekhaya
Izinwele zentsimbi ezityebileyo zeenwele zentsimbi
Ukunyamekelwa kweenwele nge-perm
Ziziphi iivithamini eziyimfuneko kumfazi okhulelwe?
I-Flounder ibhaka ngeetamatato
Udokotela uNicokolai Penkov
Indlela yokufundisa umntwana ukuba adide kwiminyaka emi-5
Indlela yokuhlakulela ingqalelo kweso sikolo?
Ukusetyenziswa kwamaskiti ase-alginate ekhaya
I-muscular dystrophy: ibangela, unyango
Ikhekhe leCoconut ne-cream filling
Yintoni abantu abangayithandi kubafazi?
Indlela yokusebenzisa isalathisi ngokuchanekileyo
Iingcebiso ezimbalwa ezilula zokunakekelwa kweso
I-Influenza, iimpawu zentsholongwane, ukukhusela kwayo
Iimpawu zokubaluleka zeNew New Year 2018 zeenwele zaliphi na ubude
I-cosmetology yama Laser ngokubhekiselele kumanqaku atyulayo: yintoni okufuneka uyifumane?
Izinja: ukhathalela i-bitch
Iziphazamiso zentlungu kubantwana kunye nemiqondiso yazo
Indlela yakho yokuphuma: iingubo ezithandwayo zambusi-ihlobo 2016